भान्सा लागि linoleum छनौट गर्न कसरी?
भान्सा लागि कवर कसरी ठीक छान्नुभएको गर्न तल्ला मा यसको जीवन र मर्मतका आसानी निर्भर गर्दछ। नियमको रूपमा, कुकिंग को ठाँउ हामी टिकाउ र व्यावहारिक unpretentious सामाग्री, टिप्न प्रयास गर्नुहोस्। सबैभन्दा लोकप्रिय कोटिंग्स एक linoleum हुन मानिन्छ छ। हामी भान्सा linoleum, र के खोज्न छनौट गर्न कसरी हेर्न यस लेखमा। भान्सा लागि सर्वश्रेष्ठ linoleum कुकिंग क्षेत्र मा हरेक तल्ला आवश्यकताहरु को निम्न सूची पूरा गर्नै पर्छ: चिस्यान-प्रतिरोधी हुन;
Kira Plastinina - जीवनी
डिजाइनर Kira Plastinina जुन 1, 1992 जन्म भएको थियो। प्रारम्भिक बाल्यकाल देखि त्यो चित्र र आफ्नो गुडिया लागि साना कपडे सिलाई को प्यारो गर्ने थियो, यो शौक उनको बुबाको ध्यान आकर्षित गरेको छ। त्यो समय मा जवान डिजाइनर बल्लतल्ल 14 वर्ष पुरानो थियो हुनत काम गर्न आफ्नो छोरी र असीम प्रेम विश्वास, पहिलो स्टूडियो शैली Kira Plastinina को 2006 मा खोज गर्न पुगे। Kira बुबा कम्पनी को सीईओ थियो, र सक्रिय यसको विकास र संवर्धन मा भाग। Kira Plastinina नै ड्र थम्बनेल लुगा लागि, कुराहरू एक किसिम ले प्रेरित: यात्रा, पुस्तकहरू, चलचित्रहरू .
मनोविज्ञान मा Psychoanalysis
त्यहाँ psychoanalysis यस विज्ञान मा मनोविज्ञान र बहु-faceted को गहिराई, र psyche को अध्ययन लागि सबै भन्दा राम्रो ज्ञात तरिका को एक को कानून। अन्तिम शताब्दीका को सुरुमा यो अष्ट्रीया वैज्ञानिक Freud, यो क्षेत्र स्थापित। आफ्नो शिक्षा अनुसार, हामीलाई प्रत्येक को psyche को माथि बनेको छ: सजग भाग;
नवजात शिशुहरु लागि Infacol
घडी वरिपरि पहिलो केही सप्ताह सुतिरहेको नवजात जहाँ अवस्था जोगिन सक्दैन जवान आमाबाबुले अधिकांश, घडी रो देखि straining सुरुवात। एक shrill कराउँदै सुनिंनु द्वारा accompanied छ, र खुट्टा सबै समय pursed: प्रतिस्थापन भने बच्चा। स्पष्ट, उहाँले दुखाइ चिन्ता थियो। आमा ग्याँस यो भनिन्छ, र डाक्टर colic निदान। तर डराउनु हुँदैन। शिशुहरु मा Colic - रोग तर जीवनको चौथो-पाँचौं महिना उहाँलाई चिन्ता गर्न बन्द हुनेछ छ कि एक अस्थायी अवस्था छैन। यो स्तन दूध वा छाँटकाँट सूत्र छ जो नयाँ खाना, भिज्न गाह्रो छ जहाँ आन्द्रा, को अपरिपक्ता सम्बन्धित छ। तर, लगातार रो असम्भव बेवास्ता गर्न। सबै उपलब्ध को आमाबाबुले बच्चा मदत गर्न प्रयास हो। तिनीहरूले undertook जेसुकै होस्, असफल colic हटाउनु। कारण बिना यो अवधि जीवनको पहिलो वर्ष सबैभन्दा कठिन मानिन्छ छ छैन। सहायता पेट सायद एक बच्चा शान्त मदत गर्नेछ भनेर सबैभन्दा सरल उपकरण - उहाँलाई माथि टिप्न छ। यो छोराछोरीको (एक आभा भनिन्छ) ऊर्जा क्षेत्र साधारण मा आफ्नो आमा संग सात वर्ष सम्म तपाईं आमा र बच्चा bellies छोएको त उनको काखमा बच्चा पूरा गर्न प्रयास गर्नुपर्छ कि विश्वास छ। आभा को अवधारणा बनाउँछ भने तपाईं आफ्नो आमाको शरीर गर्मी आफ्नो बच्चा, तपाईं तर्क गर्न सक्दैन soothe हुनेछ भनेर केहि मुस्कान। colic परित्याग र एक बच्चा molest जारी गर्न त सजिलो छैन भने यो carminative लागूपदार्थको प्रयास लायक छ। यो समूह पाचन पर्चा देखि संचित ग्याँसहरु धपाउने भन्ने एजेन्ट सामेल छन्। आफ्नो संरचना सामान्यतया अजमोद, जीरा, डिल, सौंफ को बीउ को अत्यावश्यक तेल समावेश छन्। स्वाभाविक intestines छोड्न धेरै सजिलो छ प्रमुख र ठूलो बुलबुले मा धेरै सानो ग्याँस बुलबुले को संघ प्रोभोकिंग, inert रासायनिक - यो पनि simethicone संग लागूपदार्थको सामेल छन्। एक यस्तो दबाइ Infacol छ। जीवनको पहिलो दिन सक्छ नवजात शिशुहरु लागि Infacol लागू हुन्छ। दबाइ colic र ग्याँसहरु कारण spasms व्यवहार गर्न प्रयोग गरिन्छ। केही दिनपछि बच्चा धेरै सजिलो हुन, र रो रोक्न हुनेछ। प्रवेश नियम Infacol अनि पनि colic हुनत - एक डाक्टर द्वारा निर्धारित हुनुपर्छ कुनै दबाइहरु लिएर, रोग छैन। उपचार र औषधिको खुराक Infacol को अवधि पनि एक बाल विशेषज्ञ निर्धारित। तयारी को सारांश मा, को पाठ्यक्रम, Infacol बच्चा दिने रूपमा यसो। पहिलो, यो निलंबन पतला गर्न हुँदैन। दोश्रो, यो प्रत्येक भोजन पहिले लिएका गर्नुपर्छ। सामान्यतया दुई पटक डाक्टर को निर्णय द्वारा वृद्धि हुन सक्छन् खुराक मा सुधार को अभाव मा, 0.
बिल्ली मा मधुमेह - लक्षण
सबै मानिसहरूलाई मधुमेह गम्भीर रोग छ, र हुनु हुँदैन तिनीहरूलाई मजाक गर्न भनेर थाह छ। पशु पनि यो खतरनाक रोग देखि कहिले काँही ग्रस्त छ। यो एक प्रारम्भिक चरण मा यस रोग पहिचान गर्न महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले, घरपालुवा मालिकको बिरालोहरु मा के मधुमेह सजग हुनुपर्छ, र यो मुख्य विशेषताहरु के-के हुन्। स्वीकृत समय उपाय आफ्नो घरपालुवा जीवन विस्तार मदत र विभिन्न जटिलताहरु जोगिन हुनेछ। बिरालोहरु मा मधुमेह को लक्षण अधिकांश मानिसहरू जस्तै, यो रोग को लक्षण धेरै मिल्दोजुल्दो छ। बारम्बार urination डोऱ्याउँछ जो तिर्खा सास्ती आफ्नो बिरालो, वृद्धि। कहिलेकाहीं जान्छन् अर्को पैदल लागि प्रतीक्षा गर्न सक्दैन र म धेरै राम्रो behaved हुनत, गलैँचा मा तपाईं लेख्न। यो भोक बढ्छ, तर पशु केकडहरुलाई मोटा छैन, तर यसको विपरीत मा, आफ्नो वजन कम। रोग प्रगति गर्न सुरु गर्दा पछि, यो बिरालो खाना इन्कार गर्न थाल्छ। यो गंभीर निर्जलीकरण हुन्छ, उल्टी, एक सामान्य कमजोरी दुखाइ। बिरालोहरु मा मधुमेह ल्याउँछ केही मानिसहरू रोग को दोषी नही एक मिठाई खाना छ भन्ने विश्वास गर्छन्। तर यो misperception। सबैभन्दा अक्सर, मधुमेह को उद्भव कारणहरू एक नम्बर हुन सक्छ। यो विभिन्न हर्मोनल असन्तुलनको, अघिल्लो संक्रमण, अनुचित आहार, तनाव, आसीन जीवन शैली, आन्तरिक अङ्गहरू र अधिक को रोग परिवर्तन हुन सक्छ। धेरै विशेषज्ञहरु बंशाणु महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने तथ्यलाई गर्छन। इन्सुलिन निर्भर र गैर-इन्सुलिन निर्भर (प्रकार 2) - मधुमेह को धेरै प्रकार त्यहाँ छन्। अक्सर, शरीर मा दुवै यी प्रकार, समानान्तर छन्। अग्न्याशय द्वारा इन्सुलिन को अपर्याप्त secretion छ जब पहिलो प्रकार हुन्छ, र दोस्रो प्रकार - यो छ जब जीवित ऊतकहरुमा यो हर्मोन को कार्य यो प्रतिरोधी हुन्छन्। बिरालोहरु या अन्य जनावरहरू मा मधुमेह insipidus जस्ता कुरा त्यहाँ छ, यो लक्षण थाहा पनि महत्त्वपूर्ण छ। यो रोग मा, electrolyte चयापचय विचलित छ, मूत्र एक कम घनत्व र लगभग पारदर्शी छ। यो जनावर गरेको शरीर तापमान को बिरालो, चाँडै अक्सर arrhythmia थकित हुन्छ, तल जान्छ। सबै यो शरीर को रिक्तीकरण पूरा गर्न जान्छ। यो बिरालो मधुमेह insipidus भने, त्यसपछि यो सामान्य ग्लूकोज, यो मामला मा उपचार पारंपरिक मधुमेह भन्दा केहि बढी छ हुनेछ। त्यसैले यो आफ्नो घरपालुवा हानि छैन मौका एक विशेषज्ञ परामर्श गर्न राम्रो छ।
दुखेको घाँटी द्वारा गोलियाँ
दुखेको घाँटी - श्वसन रोगहरु उपग्रह, साधारण चिसो मा भनिन्छ, र त्यसैले कम्तिमा एक पटक अधिकांश मानिसहरू छन् यो लक्षण एक वर्ष सामना। यस्तो दुखाइ विशेष बलियो छ, र रोग - - दुखेको घोक्रा झुकाउ भएकाहरूलाई, अवस्था थप गम्भीर छ एकदम खतरनाक छ। हामी एक दुखेको घाँटी देखि एक ट्याब्लेट यस या कि रोग मा प्रासंगिक छन् के बुझ्न हुनेछ। दुखेको घाँटी गराउनुहुन्छ तीव्र सार्स मान्छे को अवधि मा कारण pharyngitis वा laryngitis गर्न गले मा ड्राई, दुखेको र जल को गुनासो। पहिलो मामला मा, गले को फिर्ता माथिल्लो भाग को रातो पर्खाल - यो स्पष्टसँग दर्पण देख्न छ। पूर्ण वा आंशिक - रोग पनि आवाज एक अस्थायी हानि भरेको छ किनभने laryngitis सुनिंनु, को गले र गायन तार को कम भाग असर गर्छ भने। Pharyngitis र laryngitis, सामान्यतया चिसो द्वारा accompanied र धेरै शायद एक जीवाणु स्वभाव छ। शारीरिक तापमान 37,5⁰S माथि उदाउँदैन यी अवस्थामा सामान्यतया छ। Copious न्यानो पेय रोगी गर्न राहत दिन्छ। यस्तो सुनिंनु को उपचार मा एन्टिबायोटिक प्रभावकारी छैन। तर एक दुखेको घाँटी वा tonsillitis धेरै शायद एक भाइरल स्वभाव छ। सबैभन्दा अक्सर तिनीहरूले tonsils को एक सुनिंनु प्रतिनिधित्व, streptococci र staphylococci कारण छन् - तिनीहरूले पीप वा गले को गैर-inflamed फिर्ता को पृष्ठभूमि मा एक शरमाना ढाकिएका छन्। रोग निगल रोगी दिने बिना ज्वरो र गंभीर दुखाइ द्वारा accompanied छ। यस मामला मा, आवश्यक सूक्ष्मजीवीरोधी गले दुखाइ चक्की र sprays एंटीबायोटिक। लक्षण को Exacerbation सामान्यतया साँझ हुन्छ। त्यसैले दुखेको घाँटी लागि चक्की प्रयोग, यो कारण के थाहा महत्त्वपूर्ण छ - भाइरस वा जीवाणु, र यो inflamed छ - गला वा किलकिले । घाउ आदिमा रोगाणु नाश गर्ने पाटी जब वाहेक भंग गर्न आवश्यक छ जो गले, पीडा विरुद्ध मौखिक प्रशासन लागि निर्धारित एन्टिबायोटिक, निर्धारित lozenges, अर्थात् चक्की गर्न जीवाणु मूल को सुनिंनु। सबैभन्दा प्रभावकारी preraparaty विचार गर्नुहोस्। Efizol ग्राम र ग्राम जीवाणु, Fungi Candida albicans नष्ट गऱ्यो। एनजाइना, मुखशोथ मा मौखिक mucosa को ulcerative घाउ, gingivitis को उपचार को लागि सामयिक दबाइ। Faringosept सामयिक सूक्ष्मजीवीरोधी एजेन्ट, संक्रमण रोक्न लागि, tonsils, pharynx, ट्रेकिआ, नाक गुहा को सुनिंनु संग र postoperative अवधि लागू जीवाणु एक व्यापक स्पेक्ट्रम, विरुद्ध प्रभावकारी। Laripront जीवाणुहरू र Fungi दुवै संग संघर्षरत पनि ENT-संचालन गर्न र तिनीहरूलाई पछि लागू हुन्छ। Geksadreps streptococci, staphylococci, micrococci र Corynebacterium हत्या, एनजाइना, pharyngitis, gingivitis, periodontal रोग उपचारमा प्रयोग गरिने छ। गोलियाँ शरिरका कुनै भाग बेहोस बनाउन दिइने औषधि दुखेको घाँटी को symptomatic उपचार गर्न, एक analgesic पदार्थ समावेश ट्याब्लेटको। Srepsils प्लस staphylococci, streptococci, diplococci र Fungi विरुद्ध सक्रिय र सूक्ष्मजीवीरोधी घटक, साथै Candida lidocaine (एक स्थानीय शरिरका कुनै भाग बेहोस बनाउन दिइने औषधि) समावेश छन्। Geksoral ट्याबहरू chlorhexidine (जीवाणुरोधी व्यापक स्पेक्ट्रम) र benzocaine (एक शरिरका कुनै भाग बेहोस बनाउन दिइने औषधि) समावेश छन्। ड्रिल यो tetracaine को सामाग्री दुखाइ suppresses। प्राकृतिक उत्पादनहरु कृत्रिम घटक को एक न्यूनतम Askosept सूक्ष्मजीवीरोधी गतिविधि छ जो (menthol, camphor, thymol, एस्कोर्बिकएसिड), स्थानीय प्रतिरक्षा बढ्छ पाइन्छ। एक दुखेको घाँटी र गंभीर सूक्खापना Islamint , आइसलैंडिक मश देखि अर्क आधारित। मदत गोलियाँ bothers भने यी लागूपदार्थको पनि साधारण चिसो (सार्स) मा प्रासंगिक छन्। यसले भाइरस कारण दुखेको घाँटी को उपचार को लागि पाटी, अझै अवस्थित छैन भनेर टिप्पण लायक छ। यी धन सबै मात्र लक्षण राहत तर रोगजनक मार्न छैन।
फैशन उद्योग अन्तमा पूर्णतया पूर्ण बालिका लागि लुगा गर्न पे पर्याप्त ध्यान योग्य। सधैं छ तर, लुगा चलाखीपूर्ण दोष concealing र मर्यादा emphasizing, कौशलतापूर्वक छान्नुभएको हुनुपर्छ। तर, एउटै समयमा हामी संसारमा खातामा नवीनतम रुझान लिन पर्छ। शानदार उत्पादन शानदार र महिला हेर्न क्रम मा, तपाईं यस मौसम लागि पोशाक, र फैशन को पूर्ण साँझ टिप्न कसरी सिक्नुपर्छ कपडे midi मा केंद्रित। साथै लोकप्रिय पोशाक "प्रकरण", तिनीहरूले आत्म-रंग र खुला काँध हुनुपर्छ। डिजाइनर पनि जो नेत्रहीन स्लिम ठाडो कट लाइनहरु, जस्ता चाल गर्न resorted छन्। यो पनि ठूलो महिलाहरु को लागि एक बुना फैशन को एक सुन्दर छवि एक महत्त्वपूर्ण घटक छ। यहाँ तपाईं स्वेटर, स्वेटर, Cardigans र tunics को एक किसिम बीचमा रोज्न सक्नुहुन्छ, यो उनको सिद्ध आंकडा जोड र आकर्षण प्रकट कि कमर मा एक बेल्ट लगाउने सिफारिश छ। लोकप्रियता को शिखर मा 2014 मा वजन महिला लागि फैशन फर महत्त्व दिन्छ, फर कृत्रिम र प्राकृतिक दुवै संग लोकप्रिय छ। तपाईं एक मूल बाटो भीड देखि बाहिर खडा गर्न चाहनुहुन्छ भने, त्यसपछि यो एक बेल्ट द्वारा complemented छन् जो फर वास्कट, प्रयास गर्न सम्भव छ। पूर्ण प्रस्ताव लागि आधुनिक फेसन को पोशाक भन्दा गाढा हुनुपर्छ जो Wedges, को आवेषण संग कपडे सकिरहेको। एक पोशाक संग विशेष गरी असल voluminous sleeves फर हेर्न हुनेछ। यो Basques को वृद्धि लोकप्रियता नयाँ आइटम फैशन पूर्ण बिन्दु। यो कपडे, स्कर्ट वा जैकेट एउटा साथै रूपमा प्रयोग गरिन्छ। माझमा रंग प्यालेट प्राथमिकता उज्ज्वल र रंगीन Shades वा वस्त्र मा darkened टन दिन सिफारिस गरिएको छ। सुशील यस्तो ज्यामितियआकार, धारियों वा बान्की, साथै एक सेल रूपमा उज्ज्वल प्रिंट, को एक किसिम हो।